Kedu ihe bụ ọkachamara dị mkpa na azụmaahịa ọgbara ọhụụ na 2018? | Martech Zone
Ikpeazụ ọnwa ole na ole m na-arụ ọrụ na curriculums maka dijitalụ ahịa noo na asambodo nke mba ofesi na mahadum. Ọ bụ njem dị egwu - na-enyocha miri emi etu ndị ahịa anyị si akwadebe na mmemme mmemme ha, yana ịmata ọdịiche ga-eme ka nka ha nwee ike ịdị na ahịa.
Igodo nke usoro mmemme ọdịnala bụ na usoro ọmụmụ na-ewe ọtụtụ afọ iji kwado ya. N'ụzọ dị mwute, nke ahụ na-eme ka ndị gụsịrị akwụkwọ nọrọ ọtụtụ afọ ka ha na-abanye ọrụ ma ọ gwụla ma ha enweela ọzụzụ bara uru.
Ihe dị mkpa karịa ịmụpụta mgbanwe agbanwe agbanwe nke usoro teknụzụ azụmaahịa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnwe usoro ịdọ aka na ntị maka ịhazi, ịtụ, na ime atụmatụ ahịa ọ bụla. Ọ bụ ya mere m ji mepee ndebanye ahịa mkpọsa ahịaỌ bụ ndepụta zuru oke nke na-eme ka atụmatụ gị ga-aga nke ọma dịka o nwere ike.
Teknụzụ na mgbasa ozi ọha na eze enwewo mmetụta dị ukwuu n'ahịa ahịa n'ime afọ ole na ole gara aga. Nke ukwuu, na ndị nwere obere azụmaahịa, ndị ọchụnta ego, na ndị na-ere ahịa nwere ike mkpa imelite usoro ha iji wee soro ọgbọ ndị na - azụ ahịa (Gen Z) na - arụ ọrụ nke ọma ma na - eji teknụzụ na - aga n'ihu. Mahadum Maryville University na Azụmaahịa
Mahadum Maryville etinyela ndepụta a zuru ezu nke nkà dị mkpa maka ndị ahịa iji nwee ihe ịga nke ọma n'ebe ọrụ. Jide n'aka na ị gụọ ọkwa ha niile na infographic dị n'okpuru, Nkà Azụ Azụ Ahịa 11 maka Ndị Innovators Business na Master.
Nkà Azụ Ahịa Kachasị Mkpa maka 2018
Ọdịnaya Ọdịnaya - Otu na-ahazi nke ụdị niile nwere ike iji ndị na-ere ahịa mepụta ọdịnaya mbụ, itinye aka na ya. 86% nke ndị na-ere ahịa na-eji ahịa ọdịnaya dị ka akụkụ nke atụmatụ ha oge niile, ma ha na-arụ ọrụ maka njikọta ụwa ma ọ bụ obere azụmaahịa mpaghara, agbanyeghị, naanị 36% na-enyocha nka ahịa ọdịnaya ha dị ka ndị tozuru etozu ma ọ bụ ọkaibe. Ihe okike na njikwa, nchịkọta weebụ, na njikwa ọrụ ntanetị bụ ikike niile dị na mpaghara a.
Ahịa ekwentị - 219.8 nde ndị America - 67.3% nke ndị bi na United States - nwere ama. Nke a na-eme ka usoro aghụghọ dị mkpa maka mbọ ahịa otu nzukọ. Ohere iji nweta igwe mmadụ zuru oke site na ekwentị buru ibu, ebe ndị America na-ele igwe ha na nkezi 47 ugboro n'ụbọchị. Ọnụ ọgụgụ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ maka ndị America nọ n'agbata afọ 18 - 24, ndị na-enyocha ekwentị ha ihe ruru 86 ugboro kwa ụbọchị Igodo dị n'ime mpaghara a gụnyere imewe mkpanaka, mmepe mkpanaka, na nyocha e-commerce.
E-mail Marketing - E-mail ahịa abụwo ụzọ dị mkpa maka ọtụtụ afọ ma ga-anọgide na-adị. 86% nke ndị ahịa na-eji e-mail kesaa ọdịnaya ahịa. Azụmaahịa azụmaahịa, atụmatụ ntinye aka nke ndị debanyere aha, na atụmatụ mmụba ndị na-edebanye aha bụ ihe niile dị mkpa na-egbu n'ime usoro a.
Social Media Ahịa - 70% nke Gen Z na-azụta ngwaahịa na ọrụ site na mgbasa ozi mmekọrịta, na-eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi bụrụ ihe dị mkpa iji ruo ọnụ ọgụgụ mmadụ 69% nke Gen Z na-eji Instagram, na-eme ka ọ bụrụ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ewu ewu. Nke a na-esote Facebook na Snapchat, nke ọ bụla ji 67% mee ihe. Ná nkezi, ndị na-ere ahịa na-eji usoro ntanetị mgbasa ozi ise iji kesaa ọdịnaya. Ikike ndi isi na mpaghara a gunyere oru nlekota oru nke ndi mmadu, atumatu ọdịnaya, na uzo okike.
Ahịa Injin Ọchụchọ - Inweta ahia site na nyocha na ugwo na-acho ndi ahia ka ha noro na mgbanwe mgbe nile. Dịka ọmụmaatụ, Google na-emelite algorithm ya karịa 500 ugboro n'afọ. Ihe njikarịcha njin ọchụchọ (SEO) na ọnụnọ organic bụ ihe kachasị mkpa n'etiti 69% nke ndị ahịa North America inbound SEO, mgbasa ozi ọchụchọ akwụ ụgwọ, yana njikarịcha weebụsaịtị bụ isi ọrụ dị na mpaghara a.
Mmepụta vidiyo - 76% nke ndị na-ere ahịa na-emepụta vidiyo dị ka akụkụ nke atụmatụ ahịa ha vidiyo ndị a nwere ike itinye ajụjụ ọnụ, ihe nkiri, na ụdị akụkọ akụkọ ndị ọzọ. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa iji ruo Gen Z. 95% nke ọgbọ ahụ na-eji Youtube, yana 50% n'ime ha na-ekwu na ha "enweghị ike ibi na - enweghị" weebụsaịtị websaịtị vidiyo. Ikike ndi isi na mpaghara a gunyere edezi vidiyo, ihe omimi, na ichota ọdịnaya.
Nyocha data - 85% nke ndị ahịa jiri ngwa ọrụ nyocha na usoro azụmaahịa ha. Nchịkọta bụ nkà nke abụọ siri ike achọpụtara ịchọta na ahịa ahịa ọhụụ, yana 20% nke ndị na-ere ahịa na-ekwupụta na o siri ike ịchọta N'agbanyeghị nsogbu a, 59% nke ndị na-ere ahịa na-ezube ịbawanye nkà nyocha ahịa dijitalụ na ụlọ ọrụ ha. Ngwuputa data, nyocha data, na nyocha onu ogugu bu ihe omuma di n’ime mpaghara a.
De blọgụ - 70% nke ndị ahịa na-eji blọọgụ iji kesaa ọdịnaya maka ebumnuche ahịa na ịde blọgụ ugboro ugboro nwere ike ịkwalite okporo ụzọ ieslọ ọrụ ndị na-ebipụta 16 + posts kwa ọnwa nwetara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3.5 ugboro karịa karịa ụlọ ọrụ ndị na-ebipụta n'etiti 0-4 kwa ọnwa posts. Ikike ndi isi n'ime mpaghara a gunyere ihe okike, ide ederede, na ihe omuma.
Ọrụ Nkà - Ikike nka oru oma bu ndi isi ahia nke ndi ahia di iche-iche choputara dika ihe di nkpa n’inyere ha aka ime ihe ha choro. Agbanyeghị, achọpụtakwara na ọ bụ ọkachamara kachasị ike esetịpụrụ iji nweta ahịa ahịa ọhụụ. Ntinye ego, nhazi nhazi, na ROI na metric metrics bụcha ikike dị na mpaghara a.
Nkà Ahụmahụ Onye Ọrụ - Nchịkọta ahụmịhe onye ọrụ bụ usoro kachasị sie ike maka ndị na-ere ahịa. Agbanyeghị, ndị ọkachamara nwere ahụmịhe nwere ike ịmasị mmasị na mmasị ndị ahịa na akparamaagwa ma nyere aka wepụta weebụsaịtị na ngwa iji mee ka njigide na ahịa ndị ahịa. Nnyocha, inye nghọta ndị ahịa banyere omume, yana nzuzo bụcha nka dị mkpa na mpaghara a.
Basic Design Nkà - 18% nke ndị na-ere ahịa na-akọpụta nka imepụta dị ka ihe siri ike ịchọta na ahịa ahịa ọhụụ, na-eme ka ọ bụrụ ọkachamara nke atọ siri ike setịpụrụ ịchọta na ahịa ahịa ọhụụ agbanyeghị, ịre ahịa ọdịnaya n'ụdị ya niile ka kwesịrị ịmasị anya, na nka ndị a gara n'ihu na-achọ. Nkà ndi isi n’ime mpaghara a gunyere ihe osise, okike, na onyonyo.
Tags: Analyticsbachelor si na ahiaịde blọgụcontent Marketingdatadesignemailakara ahịaarụmọrụ ahịaahịa opsmahadum maryvilleMobile na Mbadamba ụrọnyocha ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọChọọ MarketingSocial Media Marketinguiahụmahụ onye ọrụuxvideo na-echegharịmmepụta vidiyo